Indlu yePanoramic enegadi kwi-villa - I-Airbnb
Indlu yePanoramic enegadi kwi-villa
Ifulethi elitsha, elitofotofo kwi-villa entle enegadi yepanoramic. Ibandakanya igumbi lokuhlala elikhulu neliqaqambileyo elinekhitshi, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elinefestile. Ijonge i-panoramic terrace kunye negadi yabucala. Kuyenzeka ukuxhobisa iibhedi ezimbini ngaphezulu zabantwana okanye enye yabantu abadala. Ifikeleleka kuphela ngemoto, imizuzu emi-5 ukusuka e-Ivrea nakwindlela eya eTurin, eAosta naseMilan. Ixhotyiswe nge-alam kunye nendawo yokupaka.
Indawo yokulala inefenitshala entle kwaye inazo zonke iinkonzo eziyimfuneko. Uphawu lwayo kukuzimela, kwindawo ezolileyo kunye nokukwazi ukusebenzisa amathuba angaphandle (i-porch, igadi) eya kwenza ukuba ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kuphumule. Kunokwenzeka ukuxhobisa iibhedi ezimbini ezingakumbi zabantwana kwigumbi lokuhlala okanye enye yabantu abadala. Kwigumbi unokongeza ibhedi kubantwana abancinci. Indawo yokuhlala ilungele abantu abangatshatanga, izibini, iintsapho, iiholide okanye uhambo lweshishini.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, \_u00A0iibhedi zabantwana eziyi-2
Indawo yokuhlala ikwiParella, ilali eneempawu ezikwinduli yeCanavese morainic amphitheatre. Ukusuka kwigumbi lokuhlala unokonwabela umbono we-morainic amphitheatre yaseSerra, eyona nduli inde ye-morainic eYurophu.
Indawo ikwicala ledolophu, kodwa ilunge kakhulu kwizinto eziyimfuneko (indawo yokutyela-pizzeria, igrosari, ikhemesti kunye neziko lezonyango).
Imizuzu emihlanu kude unokufumana iivenkile ezinkulu kunye namaziko okuthenga kunye neevenkile kunye namaziko awodwa
Umninimzi uhlala kwisakhiwo esifanayo kwaye uya kukwamkela ngokobuqu, ekubonelela ngezinto zokutyelela ukukukhokela, ulwazi ngeendawo ezinomdla kakhulu kunye neendaba kwiziganeko eziphambili ongaziphosakela.
Intshukumo yolwamkelo iya kwenziwa xa ufika.
Umninimzi uhlala kwisakhiwo esifanayo kwaye uya kukwamkela ngokobuqu, ekubonelela ngezinto zokutyelela ukukukhokela, ulwazi ngeendawo ezinomdla kakhulu kunye neendaba kwiziganeko e…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Parella